Ny sambo dia zavatra vitan'ny olombelona mihafo eo ambon'ny rano sy afaka mihetsika, entin'ny mpandeha ao anatiny na tsia. Mamaly ny fangatahana ny fitaterana eo ambon'ny rano na eo ambonin-drenirano, ary afahana manano asa famokarana isan-karazany toy ny fitaterana entana na olona, miady eo ambonin-drano, manjono, fitsangantsanganana, ary sampandraharaha hafa toy ny fiarovana ny sambo hafa.
Ny karàka (avy amin'ny teny espaniola carraca)
Ny Queen Mary 2 any Alemaina
Ny sambo zavatra nanatitra ny Olombelona anatin'ny fivoarana ara-tsaina. Zavatra tsy azo navela tamin'ny ady sy ny fandresena, ary koa ho an'ny fanjonoana, niova izy ary singan'ny fomba fivarotana sy fiadiana ankehitriny : sambom-panjono aman-tapitrisa no ampiasain'ny mpanjono folo tapitrisa eto an-tany ary ny ady ankehitriny dia miantso sambo saro-drafitra mba hitondra sy hanohana ny hery eo an-tany ; sambom-barotra 35 000 no nitondra ny 7,4 miliara taonina (t) tamin'ny 2007.
Ny zahatra vita vatankazo
Ny sambo koa dia nandray anjara tamin'ny fahitam-baovao ara-tsiansa ary amin'ny fiparitahan'ny kolontsaina : ny mpitondra sambo sinoa toy i Zheng He dia nafahana nizara ny fahitam-baovao toy ny famantaranavaratra na ny vanja, ary ny fizahana tany Amerika dia nanaparitaka ny kolontsaina eoropeanina eo amin'io kontinenta io. Na dia nanmpiasaina ho an'ny fanjanatany sy ny varotra mitelo-joro ara ny sambo, nampiasaina ho an'ny fikarohana ara-tsiansa sy ho an'ny fanjakana ara-kolontaina ny firenena koa ny sambo.
Araka ny nasehon'i Thor Heyerdahl tamin'ny Kon-Tiki, afaka miampita ranomasina mivelatra isika amin'ny alàlan'ny zahatra vita vatakazo. Avt amin'ny sambo vita vatankazo hatramin'ny mpitondra fiaramanidina atosiky amin'ny alàlan'ny fanosehana nioklary ankehitriny, mitantara ny Olombelona fotsiny ny sambo.
Fitaovana sy fitao fanamboarana samboModifier
Hatramin'ny anivon'ny taonjato faha 19 ny ankabeazan'ny sambo dia efa natao tamin'ny fitao rehetra fantatra, indrindra ny hazo, ny hodi-biby, na ny vy ho an'ny sambo lehibe ankehitriny. Ny sambo tamin' Ejipta taloha dia vita zozoro.
Ankehitriny, ny ankabeazan'ny sambo amboarina ho an'ny fivarotana iraisam-pirenena dia vita vy. Tamin'ny 1855, ny fanamboarana sambo vita vy sy simenitra dia nobreveten'ny frantsay.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sambo&oldid=964716"
Dernière modification le 14 Janoary 2019, à 12:44
Voaova farany tamin'ny 14 Janoary 2019 amin'ny 12:44 ity pejy ity.